Wazi njani xa uGoogle ehlaziya imifanekiso yendawo -Geofumadas
NgoJanuwari, 2011 Google umhlaba / imephu
Sonke siyakuthanda ukwazi ixesha apho indawo yomdla wethu ithola uhlaziyo olutsha Umhlaba ka-Google.
Ukuqaphela iinguqulelo zeGoogle ezenza idatha yenkcazelo yayo iyanzima, indlela ekulumkisa kuyo LatLong kuyinto engalunganga, kwaye nangona kungekudala shicilela iifayile ze-kml Ngamajometri amabi kuhlaziyo ngalunye, akukho lula ukulandela umkhondo wazo. Ukulungiselela ezi njongo, uGoogle usungule ukulandela ilizwe lakho, inkonzo esombulula le mfuno, kwaye isebenza ngeakhawunti ye-gmail ngendlela efanayo nezilumkiso zamagama aphambili.
Isinyathelo se1: Yiya Kulandele Ihlabathi Lakho
Inyathelo 2: Khetha indawo.
Unokubonisa ulungelelaniso, ujikeleze kwimaphu okanye ubhale idilesi.
Ngokomzekelo, iSantiago, chile, av del condor.
Ukwenza ngokucwangcisa kuya kufuneka uhambe kwifom:
-33.39, -70.61 okuthetha ubude be-33 degrees kwintshona ye-hemisphere kunye ne-latitude ye-70 degrees kumazantsi e-hemisphere. Kungenxa yoko le nto bengekhoyo.
Indawo elungelelanisiweyo, ngumnqamlezo nje embindini womboniso. Akukho ndlela yokubeka imilo, kodwa kuyaqondakala ukuba imifanekiso yolwandiso olukhulu ngenxa yoko inqaku libalulekile kuhlaziyo kuyo yonke loo ndawo. Ukuba sifuna ukulandela wonke ummandla, kuya kufuneka sibeke amanqaku kwiikona zommandla wethu okanye kwiindawo ezimelweyo, ezinje ngokudibana phakathi kwemifanekiso.
Inyathelo 3: Khetha inqaku.
Xa iqela likulungele, sicofa kwiqhosha "khetha indawo"Yaye siya kugcwalisa izikhala, apho singenza khona igama, njenge" Zona el salto, porvenu vespucio "
Inyathelo 4: Yamkela
Emva koko sikhetha iqhosha "Ngenisa"kwaye ilungile. Siza kufumana i-imeyile eqinisekisa ukuba sikhethe indawo yokubeka iliso.
Unokukhetha "ideshbhodi”Ungazibona iingongoma esizilandelayo, uzicime okanye ungeze ezintsha. Nje ukuba indawo ihlaziywe, siya kufumana i-imeyile enesaziso, oku kusebenza kuzo zombini iGoogle Earth kunye neMephu zikaGoogle, njengoko zisebenzisa isiseko esinye somfanekiso.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ukwandiswa kwedolophu, umxholo we-2011
Post Next course AutoCAD FreeOkulandelayo »